Kooxaha Real Madrid & Man City oo kala shukaansanaya Kylian Mbappe – Gool FM
Kooxaha Real Madrid & Man City oo kala shukaansanaya Kylian Mbappe
(Manchester) 14 Luulyo 2017 – Kooxda Manchester City ayaa riixaysa qorshe ay ku raadinayso qannaaska Monaco ee Kylian Mbappe isla xagaagan, iyagoo ku cariirinaya kooxda Real Madrid.
Khabiirka kubadda Spanish-ka ee Graham Hunter ayaa rumaysan in City ay tahay kooxd Ingiriiska ah ee ugu habboon laacibkan.
“City waxay si xooggan ula xaajoonaysaa wakiillada Mbappe iyagoo u sheegaya inay City tahay kooxda ku habboon ee uu ku barbaari karo, isagoo ka hoos shaqaynaya macallinka wayn ee Pep Guardiola isla markaana lacag fara badan helaya,” ayuu ku yiri Sky Sports News.
“Real Madrid, ayaase wakiilka Mbappe ku shukaaminaysa inay lacag iyo guulba u hayaan muluqan oo ay doonayaan inay baanka u jebiyaan, iyadoo uu aad u dalbanayo Zidane, oo Mbappe yaqaanney tan iyo markii uu 14-jir ahaa.” ayuu raaciyay.
Kooxda ay AC Milan la ciyaarayso isreebreeb-horaadka EL oo la shaaciyay
RASMI: Dadabka Kyle Walker oo ku biiray kooxda Manchester City + Sawirro